वर्षा र बाढीमा परेर धनुषामा एकको मृत्यु, एक वेपत्ता सैकडौ विस्थापित
जनकपुरधाम, साउन २९ । विगत चार दिन देखि परेको मुसलाधार वर्षाका कारणले धनुषामा खोलाले वगाउदा एक जनाको मृत्यु हुनुको साथै एक वालिका वेपत्ता भएका छन् ।
चारनाथ खोलाले बगाउदा धनुषा जिल्लाको गणेशमान सिंह चारनाथ नगरपालिका वडा नं. १ घर भएका २२ वर्षे राजाराम यादवको मृत्यु हुनुको साथै नगराईन नगरपालिका वडा नं. ४ घोडघास घर भएका गुरगुर राउतको ९ वर्षिया नाम नखुलेका छोरीलाई मनियारी खोलाले बगाउदा बेपत्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ ।
उता बालिकालाई उद्धारका लागि गएका एक जना महिलालाई पनि खोलाले वगाउदा उनी रुखको हाङ्गा समाएर बाँच्न सफल भएपछि स्थानीय बाँसीले पछि महिलालाई उद्धार गरेका छन् । उता बेपत्ता भएका बालिकाको खोजतलास जारी नै रहेको छ ।
वर्षा तथा विभिन्न खोलामा आएको बाढीका कारणले धनुषाका विभिन्न नगरपालिका तथा गाउँ पालिकाका गरेर ८५ वटा घर भत्किएको पनि प्रहरीले जनाएको छ । यसै गरि धनुषाको ८ सय ७५ घर पूर्ण डुवानमा परेका छन् भने चार हजार घरहरु आंशिक रुपमा डुवानमा परेको जिल्ला विपत व्यवस्थापन समिति धनुषाले जनाएको छ ।
उता अत्यधिक वाढीका कारणले धनुषा जिल्लाको पूर्वी भेगमा रहेको कमला नदिमा आएको भिषण बढीवाट जिल्लाको फूलवरीया, सिग्याही, पटेर्वा, ईनर्वा मलहनीया गाउँमा पानी पस्दा सैयौ घरहरु डुवानमा परेको नेपाली काँग्रेसका स्थानीय नेता विश्वेश्वर यादवले बताउनु भयो ।
यसै गरि कमला तथा चारनाथ खोलाले ठाउँ ठाउँमा व्यापक कटान गरिरहेका कारणले कैयन गाउँका संकडौ वस्तिहरु उच्च जोखिममा रहेको प्रहरीले जनाएको छ । यसै गरि जब्धी खोलामा आएको बाढीका कारणले मुखियापट्टी मुसरनीया गाउँ डुवानमा परेका छन् ।
यसै गरि जनकपुपुर ढल्केवर जोड्ने ३३ के भि प्रसारण लाईनको पोल ठाउँ ठाउँमा बाढीले ढलेका कारणले आज विहान देखि नै जनकपुरको विद्युत सेवा पूर्ण रुपमा नै अवरुद्ध रहेको छ । अहिले ढलेका पोललाई मरम्मत गर्नका लागि नेपाल सेनालाई परिचालन गर्ने काम भएको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला विपत व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दिलीप चापागाईले बताउनु भयो ।
अत्यधिक वाढीका कारणले धनुषाको ग्रामिण क्षेत्रका ११ हजार भोल्टको २५ भन्दा बढी पोलहरु ढलेका कारणले १ दर्जन गाउँमा विद्युत सेवा पूर्ण रुपमा नै ठप्प रहेको नेपालविद्युत प्रासधकरण जनकपु्र वितरण केन्द्रका प्रमुख जितेन्द्र झाले बताउनु भयो ।
यसै गरि वर्षा र वाढीका कारणले पूर्व पश्चिम लोकराजमार्गको रातो खोलाको पुल तथा बडहरी खोलाको पुल पनि भासिएका कारणले सो वाटो पनि अहिलेका लागि अवरुद्ध रहेका छन् ।
जनकपुर उपमहानगरपालिकाको पुल चौक, बाल्मिकी नगर, पिडारी गाउँ, दशरथनगर, विश्वकर्मा चौक, ब्रह्मपुरी सहितको वडाहरुमा भएका सैकडौ घरहरु डुवानमा परेका छन् । पुल चौक एरियामा डुवानमा परेका व्यक्तिहरुलाई वोर्टले उद्धार गरेर जनकपुरको विभिन्न धर्मशाला तथा अग्लो स्थानमा ल्याउने काम भैरहेको छ ।
यसै बीच वर्षा तथा बाढीलाई दृष्टिगत गरेर धनुषाका सम्पूर्ण नीजि तथा सरकारी विद्यालयहरु आज देखि तीन दिनका लागि बन्द गरिएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाले जनाएको छ । यसै बीच जिल्ला विपत व्इवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरुले बाढी पिडित क्षेत्रको अवलोकन गरेर तत्कालराहत तथा उद्धारको कार्यक्रम गर्नका लागि विभिन्न निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
अत्यधिक वर्षा र बाढीका कारणले जनकपुरवाट सञ्चालनमा रहेका सवै मार्गहरु अवरुद्ध भएका कारणले यातायात सेवा ठप्प रहेको छ । यसै गरि जनकपुर विमान स्थलमा पनि पानी जमेका कारणले विमान सेवा पनि ठप्प रहेको छ ।
यसै गरि महोत्तरीको सदुमुकमा सहित जिल्लाको सत्तरी प्रतिशत भूभागहरुहरु पाँच दिनको वर्षा र बाढीले डुवेको छ । महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. विरेन्द्र यादवले सदमुकाम जलेश्वरको सवै सरकारी कार्यालयहरुमा पनि पानी पसेका छन् ।
यातायात सेवा पनि वर्षा र बाढीका कारणले पूर्ण रुपमा नै ठप्प रहेको प्रजिअ यादवले बताउनु भयो ।
राहतको कार्यक्रम तत्काल गर्ने
जनकपुरधाम, साउन २९ । जिल्ला विपत व्यवस्थापन समिति सहित धनुषाका नागरिक समाजको सहभासगतामा भएको सर्वपक्षीय वैठकवाट विभिन्न शिविरमा भएका बाढी पिडितहरुलाई आजै देखि राहत सामाग्रीहरु वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पहिलो चरणमा जनकपुरको विभिन्न धर्मशाला तथा विद्यालयहरुमा आश्रय लिएर बसेकाहरुलाई राहत दिने निर्णय भएको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलीप चापागाईले बताउनु भयो ।
जनकपुरको विभिन्न धर्मशाला तथा अग्लो ठाउँमा भएका विद्यालयहरुमा मात्र एक सय परिवार बसेको हुन सक्ने भएकाले तथ्यांक संकलन गरेर राहत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएका छन् ।